Angola : Nisy namono ny solombavambahoaka avy ao amin’ny antoko matanjaka iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Aogositra 2009 19:11 GMT
Notairin'ny herisetra indray i Angola ny alin'ny faha-29 volana Jolay lasa teo. Notifirin'ny olona telo lahy tany amin'ny sisin'ny renivohitra Luanda i Beatriz Salucombo, solombavam-bahoaka avy ao amin'ny antoko politika mitondra MPLA sy ny anadahiny Antonio Neves, tompon'andraikitra ao amin'ny sampana mikarakara ireo vahiny sy mpifindra monina (SME). Bala maro no nahazo azy ireo tamin'izany teo ivelan'ny tranon'i Beatriz Salucombo.
Mazava ho azy fa nanaitra ny Angole ity raharaha ity, ary maro ny fahasorenana hita manoloana izao herisetra izao indray. I Jotace Caranca avy ao amin'ny Pensar e Falar Angola [pt] no mitantara ny fandevenana tao Alto das Cruzes ao Luanda toy izao :
Fanontaniana roa no tonga ao an-tsaina manoloana izao famonoana solom-bavambahoaka sy ny anadahiny izao. Tena ny famonoana azy ireo ve no tanjona, sa ny hangalatra fotsiny ? Tsy nisy naka nefa ny fiara nitondra an'i Beatriz Salucombo, ary tsy nisy porofo fa nisy naka ny entany. Araka ny nolazain'izy telo lahy, voarohirohin'ny polisim-pirenena any an-toerena rehefa avy nifanenjahana eran'ny renivohitra tamin'ny Zoma lasa teo nefa, dia ny hakana ny fiara no antony namonoany azy mianadahy. Maty noho ny fifampitifirana tamin'ireo polisy moa ny roa tamin'ireo voarohirohy.
Maneho ny fiaraha-miory amin'ny fianankaviana i Eugenio da Costa Almeida avy ao amin'ny Pululu [pt], ary mametraka ny fanontaniana : Inona no tena tanjona ?
Nisy nitifitra tamin'ny Alarobia alina teo i Beatriz Salucombo, olom-boafidy avy ao amin'ny antoko MPLA (faha-105 amin'ireo nofidiana izy), ary nodimandry androany noho ny tifitra nahazo azy. Mampalahelo izao namonoana azy izao satria mampametra-panontaniana ny fandriampahalemana izay tena ilain'ity firenena ity, indrindra manoloana ny CAN 2010, sady nitranga ny andro mialoha ny fankalazana ny Andron'ny Vehivavy Afrikana.
Fifandrifian-javatra fotsiny ve (?) raha tsy olona hafa ny anadahiny fa i Antonio Neves, mpiasa ao amin'ny sampana mikarakara ny fifindra-monina (SME), vondrona izay niasa mafy tato ho ato hampihenana ny fifindra-monina tsy manara-dalana (toy ny tao Lubango tamin'ny voalohandohan'ity volana ity.)
Tsy tokony ho adinoina ihany koa ny vokatry ny fampiatoana mpiasa sasan-tsasany tamin'ny 2005 izay tsy nitondrana fanazavana tsara akory, araka ny nitantaran'ny AngoNoticias azy tamin'izany, nalainy avy ao amin'ny VOA sy ny Panapress. Tsy mahatadidy fanazavana nomena mikasika iny raharaha iny aho, ary tsy afaka miditra lalina kokoa amin'iny ny Aterineto …
Angamba mety hitondra fanazavana bebe kokoa tamin'ny nahafatesan'i M'fulupinga N'Landu Victor, solom-bavambahoaka koa fa avy ao amin'ny antoko PDP-ANA, dimy taona lasa izay ity raharaha ity. Raha tsy diso ny fitadidiako, na dia miteny aza ireo manam-pahefana fa mbola mitohy ny famotorana dia tsy mbola nifarana izany ary tsy mbola nisy olona nentina teny amin'ny fitsarana.
Tsy misy tokony hanala ain'olona, hoy i Cazimar ao amin'ny Africa Minha [pt], nefa mino izy fa ireo mpamono olona amin'ity raharaha ity dia sady mpanao ratsy no niharam-boina. Famonoana olona efa nomanina no fahitany ity tranga ity :
2 herinandro izayFifidianana